Casriga ah waa waxa ugu horeeya ee qofka gaaro marka uu qofku soo tooso iyo waxa ugu dambeeya ee uu qofku taabto ka hor mid ka mid nods ka baxsan si ay hurdada. Android hadda waa nidaamka qalliinka ugu badan ee casriga ah adduunka oo dhan la saamiga 80%. Dadka samayn karaa wax walba oo ku saabsan casriga ah, sidaas daraaddeed qaar ka iib--u ogolow xitaa waxay saadaalinayaan in casriga ah ka noqday computer iyo TV hal maalin. Laakiin iyadoo muuqaalada iyo aad u badan oo ka mid ah casriga ah iyo dadka iyaga la sii joogi dheer oo dheer, iyaga maaraynta ma ahan hawl fudud oo dhan inta xogta. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jiro habab si ay u maareeyaan.
Qeybta 1: Top 5 Android Desktop Maareeyayaasha la Inta badan Downloads ah Qeybta 2: Top 5 Remote Android Desktop Manager Apps
Qeybta 1: Top 5 Android Desktop Maareeyayaasha la Downloads Most
Tababaraha desktop Android waa aalad si ay u caawiyaan dadka ay u maareeyaan files telefoonka Android kombiyuutarka. Waxaa ku xiri doona qalabka Android inay computer ka, si ay dadka isticmaala waxay awoodi doonaan inay haystaan ​​waraaqaha gurmad heli karaa casriga ah, waafajinta fayl computer, celin xiriirada Android, fariimaha, sawiro iyo wixii la mid ah. Iyadoo qalab Tababaraha desktop Android, waxaad si fudud ka dhigi doonaa casriga ah si. Taxayaa Halkan 5 sare bixi Android software Tababaraha desktop:
5 Mobisynapse 29,99 aasaasiga ah
Hoos waxaa ku qoran miis aad muujinaya kala saxda ah dhexdooda Softwares marka ay timaado in maaraynta Android casriga ah. Eeg miiska iyo waxaad yeelan doontaa faham cad oo ku saabsan 5 maamulayaasha desktop sare ee software Android.
Noocyada file kaabta Xiriirada, xogta SMS, app, video, sawir, music, abuse wac, app iyo app, jadwalka taariikhda, waraaqaha Xiriirada, SMS, app, video, sawir, music Guda yeedha, Xiriirada, SMS, app, video, sawir, music Guda yeedha, Xiriirada, SMS, app, video, sawir, music Guda yeedha, Apps, SMS
Maamulka File Haa Haa Haa Haa Haa
Maamul Chine Download, rakibi, uninstall, dhoofinta, soo dejinta, share Download, rakibi, uninstall, dhoofinta, soo dejinta Download, rakibi, uninstall, dhoofinta, soo dejinta Download, rakibi, uninstall, dhoofinta, soo dejinta Download, rakib, uninstall, dhoofinta, soo dejinta
U dir SMS Haa Haa Haa Haa Haa
Raadi xiriirada nuqul Haa No No No No
Wacaan No Haa Haa No No
Connection Cable USB, WiFi Cable USB, WiFi Cable USB, WiFi, Bluetooth, IrDA Cable USB Cable USB, WiFi
Download gudahood app Haa Haa Haa Haa Haa
Maamul warbaahinta Haa Haa Haa Haa Haa
Wondershare MobileGo for Android waa software codsiga ugu sareeya mid ka mid desktop labada Windows iyo versions Mac .
Muuqaalada Hot ee Wondershare MobileGo for Android:
Dib ugu xogta: dib xogta aad sida xiriirada, abuse wac, music, sawirada, videos, SMS, xogta app iyo app, iyo taariikheed ee ka qalab Android inay PC kaliya click ah.
Fayl kala iibsiga & maamuli: Transfer, raadinta, ku dar, tirtirto dhammaan faylasha ay ka mid yihiin xiriirada, sawiro, videos, music iyo nidaam faylasha ku saabsan qalabka Android ama SD Card. Software Tani waxay taageertaa Outlook Express, Windows Live Mail, Muuqaalka iyo Windows Cinwaanka Book. Sidaas waxaad si fudud u dajiyaan karaa & dhoofinta xiriirada, ku dar xiriir cusub ama xiriirada edit ka PC. Oo weliba waxaad ka heli kartaa oo ku milmaan xiriirada nuqul ka mid ah.
Fiiro gaar ah: SMS dhoofin karo computer iyo badbaadiyey sida file TXT ama file XML.
Beddelaan files multimedia: Beddelaan files multimedia u qaabab Android filaayo in sida MPEG / Mpg / DAT, MOV, AVI, ASF, MKV, FLV iyo wmv in MP4, MP3 ama AC3, daanyeer, AIFF, AIF, Amr, AU, M3U, FLAC, MPA, MKA, WMA MP2,, AAC in MP3.
Maamul Apps: Download, rakibi ama ka saar barnaamijyadooda goobtii. Ka sokow, aad dhoofin karaan barnaamijyadooda si SD card iyo share barnaamijyadooda saaxiibadaa.
U dir SMS, Cid u dir oo soo jawaabin SMS kombiyuutarka si toos ah.
Mobile Go siin doonaa 24/7 taageero macaamiisha via xirfad koox taageero macaamiisha.
Interface waa mid fudud oo user-friendly.
Mid ka mid ah xidid click waa u fududahay users xididka.
Version maxkamad waxa ka buuxa featured laakiin u shaqeeya maalmood oo kaliya 15.
Moborobo waa tababare kale desktop labada Android oo iPhone si ay u maareeyaan xogta.
Muuqaalada Hot ee MoboRobo:
Kaabta & Soo Celinta xogta: warbixin kaabta sida farriimaha, abuse wac, barnaamijyadooda, xiriirada, files multimedia si fudud.
Media & Xogta maamulka: Maamul noocyada kala duwan ee file warbaahinta sida sawirada, video, audio oo ay la socdaan dhufto ee gaarka ah sida Video, xarunta Mowduuca, xarunta wallpaper, PandaApp ringtone, iwm
Codsiga Management: Maamul & cusboonaysiiso codsiyada lagu rakibay. Ka sokow, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa codsiyada cusub ka MoboRobo dukaanka.
Macluumaad Device: Tus dhammaan macluumaadka lagu kaydiyo oo ku saabsan qalab iyo kaarka SD ah.
U dir SMS & Garaac baaqayaa: dir SMS, jawaab ku jiraan farriimo cusub ama ay wacaan.
Waxaa u shaqeeya labada Android iyo iPhone.
Waa lacag la'aan in la isticmaalo.
Rakibaadda drives qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah.
Waxaa lama jaanqaadi karaan qaabab file badan sida 3GP.
Kaliya shaqeeya Windows OS.
MOBILedit beddeli doonaa fikrad ku saabsan telefoonka gacanta iyo ka dhigi doonaa telefoonka gacanta wax ku ool ah oo aad u.
Features Hot ee MOBILedit:
Maamul xiriirada aad: Search xiriirada, beddelo aragtida xiriirada, ku daro ama tirtirto xiriiro.
Kaabta, soo celinta kala iibsiga & Xogta: dib dhammaan xogta daruurta ama in aad telefoonka, sababtoo ah MOBILedit hayn doonaa gurmad xogta si toos ah iyo awoodo in uu soo celin doonaa dhammaan xogta ku kaydsan casriga cusub si fudud.
U dir iyo Farriimihiisa print, wacaan, ka mobile aad soo dir farriimaha la isticmaalayo aad PC. Sidaas, waxaad ku qor kartaa fariimaha adigoo isticmaalaya keyboard aad PC iyo soo diri kartaa fariimaha koox ama fariimaha print baxay. Sida Moborobo, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa calls kombiyuutarka.
Samee ringtone: Midhadh qaniinyada dhawaaq ka mid video ama file maqal ah ama YouTube sida ringtone ee aad casriga dhigay.
Edit sawiro iyo videos, la dhisay-in editor aad u saamaxaaya in ay xaalkaa photos iyo videos si fudud.
Xidhiidhada badan: xirmaan taleefanka si PC ka via Wi-Fi, Bluetooth, IrDA ama cable USB.
Software waa in telefoonada dhamaan mobile, sida iPhone, Windows Phone, Android, Symbian, iwm
Waxay leedahay interface qabow oo aad u fududahay in la isticmaalo.
Waa awoodo in uu kaydiyo xogta daruurta.
Size badan oo waqti dheeraad ah si ay u soo bixi
Qaar ka mid ah qaababka aan la heli karin in version maxkamadda.
Waxaa jira xisbiga saddexaad Android software Tababaraha desktop badan ee suuqa iyo Mobogenie waa mid ka mid ah.
Muuqaalada Hot ee Mobogenie:
Kaabta & Soo Celinta xogta: xog muhiim ah ee kaabta qalabka Android, kaadhka xusuusta ama badbaadin nuqul gal PC. Sidaas darteed, haddii aad mislay ama musuqmaasuq wixii xog ah ka dibna aad si fudud u soo celin karaa gurmad ah.
Download iyo maarayn files: Waxaad kala soo bixi kartaa lacagta caymiska files warbaahinta oo tayo leh oo videos, sawirada, Cajalado, gacanta Apps ka web ah.
Eynaan xayeysiis iyo farriimaha: Waxaad u abaabuli karaan xayeysiiska iyo farriimaha on casriga ah.
Maamul SMS & Xiriirada: waxa aad maamuli kartaa oo tiraa SMS isticmaalaya Tababaraha SMS ah software ka aad PC. Ka sokow, aad edit karaa & maareeyo xiriirrada adiga oo isticmaalaya app this.
Download dhammaan faylasha multimedia, kulan si fudud
Update si deg deg ah Apps.
Interface ayaa inta badan waxaa loogu soo degsado files ma interface wanaagsan maaraynta file.
Ma jiro isku xirnaanta Wi-Fi in app si aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan via cable USB mar kasta.
Mobisynapse sidoo kale waa tababaraha desktop a free Android aad u. Waxaad si fudud ku xidhi kartaa casriga ah Android inay PC isticmaalaya Wi-Fi ama cable USB ah. Waxa kale oo aad maamuli kartaa barnaamijyadooda, files multimedia, SMS ama la socon macluumaadka nidaamka ku saabsan telefoonada Android.
Muuqaalada Hot ee Mobisynapse:
Dib ugu barnaamijyadooda iyo SMS: Waxaad dib kartaa barnaamijyadooda iyo SMS dhexeeya phone Android & PC.
Files aragti nidaameed in Android: Waxaad u hagaagsan karo files aragti ay ka mid yihiin jadwalka taariikhda, xiriirada, qoraal telefoonada Android
Maamul files & SMS, waxa aad maamuli kartaa ama abaabuli files dhexeeya PC iyo qalab Android, SMS group ka PC ku soo diri. Waxaad u hagaagsan kartaa sawirada, music, videos dhexeeya casriga ah & aad PC.
Waxaa maamula email si fudud.
Waxaad aan kala soo bixi kartaa barnaamijyadooda si toos ah gudahood app.
Waxaa taageeray ilaa barnaamijyadooda iyo SMS kaliya.
Tilmaamo badan oo kale afar tababare oo aan la heli karin in app this.
Si aad u isticmaasho app waxa aad sidoo kale u leeyihiin in ay dhex gasho oo aad kala soo bixi app mOffice dheeraad ah.
Qeybta 2: Top 5 Remote Android Desktop Manager Apps
Nolosha casriga ah oo aan ka casriga ah, computer, kiniin ama laptop waa ku dhawaad ​​laga yaabaa impossible.We illoobin ku saabsan waraaqaha muhiimka ah marka aan u baahan ama aan u baahan tahay si ay u helaan kombiyuutarada ku nahay markaannu on safarka. In xaaladda sida Android Remote Desktop App ka dhigi kartaa nolosha & shaqeeyaan inta badan ka sahlan. Si fudud aan heli kartaa desktop ama laptop isticmaalaya telefoonka smart Android meel kasta oo adduunka ah.
Remote fal Android Desktop Manager Apps sida portal toos ah dib ugu noo kumbiyuutarada, laptops ama kiniin ah, oo noo oggolaan in meel fog laga heli, aragtida iyo shaqada kombuyuutarrada si toos ah via naga telefoonada smart Android. Waxaad ka heli kartaa soo socda sareysa 5-ada Tababaraha desktop Remote Android:
2x RDP Client / Desktop Remote 4.4 / 5 Free
Droid Remote 4.3 / 5 Free
VNC siladda 4.4 / 5 Free
Iyadoo TeamViewer, kuu soo gudbin kartaa files muhiim ah, xaalkaa waraaqaha, isticmaali software wax ka qalabka Android inta aad xitaa safraya. App Tani free taageertaa Windows, Mac, Linux, iyo Android.
Ku soco LAN: Isticmaalka habkaani, aad hurdada ka kartaa your computer hurdada, shaqada, kala iibsiga ama edit files si fudud. Marka aad shaqada waxaa lagu sameeyey, ka dibna computer ka dib in ay mar seexan.
Isgaadhsiin la macaamiisha: Waxaad kala hadli kartaa macaamiisha aad mar walba.
Gudbinta Audio & video: Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan files macaamiisha iyo asxaabtaada.
Feature keyboard: Waxaad isticmaali doonaa sida aad computer isticmaalaan furaha gaar ah sida Ctrl + Alt + Del.
TeamViewer waa user saaxiibtinimo & waxa ay si deg deg ah waxay maamushaa PC ama server.
Waxaa gebi ahaanba xor ah oo shakhsi loo isticmaalo.
Waxaa ku wareejinaya files si dhakhso ah.
TeamViewer taageero deg deg ah waa mid daciif ah oo mararka qaar oo si habsami leh ma shaqeyn karaan qalabka qaar ka mid ah.
Ma Mozilla kartaa fog ku filan.
Download TeamViewer ka Google Play Store >>
Haddii aad u jecel yihiin in ay dhegeystaan ​​miyuusikada, daawado filimada marka aad ku jirto safarka markaas GMOTE waa Remote Android Desktop app fiican ee aad u! Iyadoo app this waxaad awoodi doontaa in aad isticmaasho telefoonka aad Android sida ay gacanta laga hago aad laptop ama PC. Ka sokow, haddii aad u baahan tahay in ay soo bandhigaan wax, ka dibna xakamayn karto PPT raaceyso, PDF ama image duubey aad si habsami leh.
Music Streaming: Waa arrin aad u fudud in la sii qulquli music aad ka PC oo dhan si aad casriga Android.
Control music & filimada: GMOTE suurtogelin doontaa in aad si aad u koontaroosho filimada ama music ka fog.
Browse files: The file browser hidi kuu ogolaaneysaa in aad dhirtuba dhammaan faylasha multimedia ku kaydsan aad PC.
App Tani waa saamayn aad u fiican inaad xakamayso PowerPoint, bandhigyada slide image ama PDF soo bandhigidda.
Waxaad awoodaa inaad abuurtaan websites ka telefoonka aad Android.
Interface user waa mid aad u qabow & fudud.
Waxa aanu taageeraan doorasho Bluetooth.
Waxa kaliya ee ay taageertaa qaabka playlist M3U.
Download GMOTE ka Google Play Store >>
3. 2x Client RDP / Desktop Remote
2x Client RDP / Desktop Remote app had iyo jeer wuu dhawri doonaa si aad uu kula xiriiro aad PC telefoonka aad Android. Wax macno ah ma meel kasta oo aad tahay iyo wax kasta oo aad rabto. Ka sokow, app this aamin doonaa PC ama laptop ka khataraha la yaqaan oo aan la garaneyn &.
Ammaanka Access: Waxaa ka aamin doonaa helitaanka smartphone Android via 2x SSL Client iyo taageero sugida 2 qodob.
Virtual mouse: Si fudud aad shaqo adiga oo isticmaalaya mouse dalwaddii xaq click samayn karaa. Waxa kale oo ay leeyihiin keyboard buuxa.
Taageero madal Cross: app wuxuu taageeraa oo dhan dhufto ee kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa codsiyada kala duwan sida Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Word iyo wixii la mid ah si habsami leh.
App Tani fog laga heli karaa server.
Waa user saaxiibtinimo oo ay fududahay in la dhigay ilaa qalabka.
View screen Full.
Keyboard Dark adag tahay in la arko muhiim ah sumadaha ama calaamadaha muhiimka ah.
Download 2x Client RDP / Desktop Remote ka Google Play Store >>
Uma baahnid in aad u leedahay in la gashto xiriiri xasaasiyad ama qaado mouse ee laptop ah, haddii aad leedahay app yar RemoteDroid lagu rakibay telefoonka smart Android. App casriga ah beddeli doonaa pad track ah & keyboard ah wireless.
Touchpad: Habkaani aad screen casriga ah ka dhigi doonaa sida touchpad ee aad PC.
Keyboard: Si fudud u helay keyboard ka smart, taas oo si dhakhso ah & raaxo leh si ay u isticmaalaan.
Waxaad isticmaali kartaa hab sawirka ama hab muuqaalka.
Waxa ay taageertaa nooc kasta oo ka mid ah shabakada Wi-Fi.
Sidoo kale waa user saaxiibtinimo iyo fududahay in la rakibo.
Waa in wireless ah (Wi-Fi) oo xidhiidh
Download RemoteDroid ka Google Play Store >>
5. VNC siladda
Waxaad meel kasta koontarooli karin computer desktop aad dunida oo dhan iyadoo la isticmaalayo qalab mobile la VNC siladda. App Tani waxay u saamixi doontaa in aad aragto PC ee desktop, xogta ay helaan, ordo codsi kasta, iwm
Taageero keyboard: Waxaad ka heli doontaa taageerada keyboard caalamiga ah iyo dhalid oo dhan jilayaasha sida ay baahidaada. Just rogto badhamada bar muhiimka ah.
Text Transfer: Waxaad nuqul ka karaa iyo Jinka qoraalka.
Mouse xaasidnimo: Waxaad ku raaxaysan doonaa howlaha boggan iyo xakameeyo shaqadaada isticmaalaya Mouse hab button. Labo ka jaftaa furi doonaa app oo kale waxa aad samayn la mouse ah.
Screen xal Sare: app ayaa taageeraya qaraarkii screen sare ilaa 5120 by 2400 pixels.
Waxay leedahay hab maamuuska fudud oo si sahlan loo qotomiyey.
Waxay leedahay fudud navigation.
Waxaad heli kartaa kombiyuutaro aan xad lahayn.
Wax macno ah ma leedahay taageero USB mouse dibadda.
Download VNC siladda ka Google Play Store >>
> Resource > Android > Top 10 Android Desktop Maareeyayaasha: Maamul Phone on PC ama PC Maamul on Phone